At the same time Paxful, which has managed to establish itself as one of the most popular peer-to-peer exchanges in Africa, does market bids and offers for Zimbabwe-based users. At first glance, there seems to be more activity in this Zimbabwean bitcoin market than on LocalBitcoins with dozens of listed advertisements. Closer inspection, however, shows that there are no cash in person, EcoCash or local bank transfer purchase options that local Zimbabweans would typically use to trade bitcoin. There are also no available advertisements for transactions in the Zimbabwean dollar (ZWL). Zimbabweans are seemingly not using the platform.